China Tubular Bandage fekitari uye bhizimisi | ASN
Pakurapwa, mushure mekuchengetedzwa uye kudzivirira kudzokororazve kwekukuvara nekushanda uye kwemitambo, mushure-kutarisirwa kwevaricose mutsinga kukuvara uye mashandiro pamwe nekurapa kwevein kusakwana.
Kukwirisa kwepamusoro, kuwacha, kusagadzikana.
Kuwedzera kuri pamusoro pe180%.
Permanent elastic yakasimba kudzvanya bhandeji nehurefu hwekudzvanyirira compression.
Apex Carton kavha
A: Isu tiri fekitori ine rezinesi rekutengesa kunze
Mubvunzo: Zvakadii neyako compamy yekubhadhara mazwi?
A: Tinogamuchira 30% dhipoziti, uye 70% mwero pamberi pekutumirwa.
Mubvunzo: Ndingawana sei mimwe mienzaniso?
1.Tinokudzwa kukupa iwe sampuli. Vatengi vatsva vanotarisirwa kubhadhara mutengo wekutakura uye sampuli, mari iyi ichabviswa pamubhadharo wehurongwa hwepamutemo.
Nezve mutengo wekutakura: unogona kuronga RPI sevhisi paFedex, UPS, DHL, TNT, nezvimwe. kana kutizivisa yako DHL yekuunganidza account. Ipapo iwe unogona kubhadhara mutoro wakanangana nekambani yako yekutakura.
Mubvunzo: Fekitori yako inoita sei zvine chekuita nekudzora kwemhando yepamusoro?
A: "Hunhu hwakakosha. Tinogara tichikoshesa kukosha kwekudzora mhando kubva pakutanga kusvika kumagumo.
1) .Zvinhu zvese zvakasvibirira zvataishandisa zvine hushamwari;
2) .Vashandi vane hunyanzvi vanochengeta zvese zvese mukubata maitiro ekugadzira uye kurongedza;
3) .Quality Kudzora Dhipatimendi inonyanya kuve nebasa rekutarisa mhando mune yega maitiro.
Pashure: Yega Yekunamatira Bhandi
Zvadaro: Plaster Bandage